Wɔkasa tiaa atitiriw ne adiyifo (1-12)
Yehowa honhom hyɛɛ Mika ma (8)
Asɔfo kyerɛkyerɛ gye akatua (11)
Yerusalem bɛyɛ abo akuwakuw (12)
3 Na mekae sɛ: “Mepa mo kyɛw, muntie, Yakob atitiriwNe Israel fi atumfo.+ Ɛnyɛ mo na anka ɛsɛ sɛ muhu nea ɛteɛ? 2 Nanso mukyi papa+ na modɔ bɔne;+Moworɔw me nkurɔfo ho were, na mowae wɔn nnompe ho nam.+ 3 Mowe me nkurɔfo honam nso,+Na moworɔw wɔn were fi wɔn ho,Mububu wɔn nnompe mu, na mutwitwa mu nketenkete,+ Te sɛ nnompe a wɔde gu dadesɛn* mu noa, te sɛ nam a egu kwansɛn mu. 4 Saa bere no, wobesu afrɛ Yehowa sɛ ɔmmoa wɔn,Nanso ɔremmua wɔn. Ɔde n’anim behintaw wɔn saa bere no,+Wɔn nneyɛe bɔne nti.+ 5 Eyi ne asɛm a Yehowa aka atia adiyifo a wodi me nkurɔfo anim ma wɔfom kwan no,+Wɔn a wonya biribi de wɔn se ka* a,+ wɔka sɛ ‘Asomdwoe!’+Nanso sɛ obi amfa biribi anhyɛ wɔn anom a, wɔde ɔko tentam no:* 6 ‘Ade bɛsa mo;+ morennya anisoadehu biara;+Esum nko ara na ɛbɛba mo so, na morenhyɛ nkɔm a ɛyɛ atoro bio. Owia bɛtɔ wɔ adiyifo no so,Na adekyee adan sum ama wɔn.+ 7 Adehufo ani bewu,+Na nkɔmhyɛfo nsa asi fam. Wɔn nyinaa bɛkata wɔn mfemfem so,*Efisɛ wɔrennya mmuae biara mfi Onyankopɔn hɔ.’” 8 Nanso me de, Yehowa honhom ama tumi ayɛ me ma;Ama atɛntrenee ne akokoduru ayɛ me ma,Sɛ menka Yakob atuatew nkyerɛ no, na memma Israel nhu ne bɔne. 9 Mepa mo kyɛw muntie eyi, mo, Yakob fi atitiriwNe mo, Israel fi atumfo,+Mo a mukyi atɛntrenee na mokyea nea ɛteɛ nyinaa,+ 10 Mo a mode mogyahwiegu kyekye Sion na mode amumɔyɛ kyekye Yerusalem.+ 11 Emu atitiriw* gye adanmude* bu atɛn,+Emu asɔfo kyerɛkyerɛ gye akatua,+Na emu adiyifo hyɛ nkɔm a ɛyɛ atoro gye sika*+ Nanso wɔde wɔn ho to Yehowa so* ka sɛ: “Ɛnyɛ Yehowa na ɔka yɛn ho yi?+ Mmusu biara remma yɛn so.”+ 12 Mo nti,Wobefuntum Sion sɛ afusaase,Yerusalem bɛyɛ abo akuwakuw,+Na Ofi no bepɔw* no bɛyɛ sɛ kwae mu nkoko.+
^ Ebetumi nso akyerɛ, “sɛ wonya biribi we.”
^ Nt., “wohyira ɔko wɔ no so.”
^ Anaa “bɛkata wɔn ano.”
^ Anaa “dwetɛ.”
^ Anaa “wɔka sɛ wɔde wɔn ho to Yehowa so.”